Kitra any Alemaina: novidian’ny Bayern de Munich i Sané | NewsMada
Kitra any Alemaina: novidian’ny Bayern de Munich i Sané
Niverina any amin’ny tanindrazany any Alemaina ilay mpilalao baolina kitra, i Leroy Aziz Sané. Tontosa ny zoma lasa teo ny fifanaovan-tsonia teo aminy sy ny Bayern de Munich. Hilalao ao amin’ity ekipan’ny renivohitr’i Alemaina ity ny tovolahy, manom­boka izao ary hiatrika ny fifaninanam-pirenena alemà na ny Bun­desliga.
Haharitra hatramin’ny 30 jona 2025 ny faharetan’ny fifana­rahan’ny roa tonta. Tsiahivina fa tany amin’ny Manchester City no nisy an’i Leroy Sané, teo aloha. 24 taona i Sané ankehitriny ary elatra havia ny toerana misy azy. Efa nilalao tao amin’ny ekipam-pirenena alemà i Leroy Sané, efa in-21 nisalotra ny akanjon’ny Mannschaft. Nahatafiditra baolina miisa dimy izy tamin’izany.
Nitentina 50 tapitrisa Euros na 1000 lavitrisa Ar ny tentim-bidin’izao fifindran-toeran’i Leroy Sané izao. “Faly izahay mandray an’i Leroy Sané hilalao ato amin’ny Bayern de Munich. Mpilalao miavaka ary efa naneho ny fahaizany tao amin’ny ekipam-pirenena. Tanjonay ny hanangona ireo mpilalao kalaza alemà rehetra ho ato amin’ny Bayern de Munich”, hoy i Karl Heinz Rummenigge, tale jeneralin’ny Bayern de Munich. Tsy hadinony ihany koa ny nisaotra an’i Hasan Salihamidzic, tamin’ny fanamorana ny fifindran-toerany. Hanamafy ny sisin’ny havian’ny kianja miaraka amin’i Serge Gnabry sy i Kingsley Coman, i Leroy Sané.